အဲဒါဘာလဲ ဘယ်မှာလဲ? ဘယ်လိုလဲ? Web Marketing မဟာဗျူဟာများ Martech Zone
သင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်တော့သောအခါသင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်စတိုးဆိုင်ကိုထားရမည်၊ စတိုးဆိုင်၌အဘယ်အရာထည့်ရမည်နှင့်သင်မည်သို့လူတို့အား၎င်းထံမည်သို့ရောက်ရှိသွားမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်၎င်းသည်လက်လီရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်စေမဟုတ်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အလားတူမဟာဗျူဟာများလိုအပ်သည်။
မင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။
ယုံချင်ယုံမယုံရင်ဆိုင်သိုလှောင်ဖို့သော့နှစ်ချောင်းရှိတယ်။ လူအများစုကလူတွေက ၀ ယ်တာကိုအရေးအကြီးဆုံး၊ ဂရုပြုကြတယ်။ သို့သော်ဒုတိယတစ်ခုမှာမူသိသာထင်ရှားမှုမရှိပါ။ လူတွေပြောတာပါ။ ဥပမာတခု? ငါဒေသခံကော်ဖီဆိုင်မကြာခဏ။ သူတို့မှာကော်ဖီဝါသနာရှင်လိုချင်တဲ့အရာအားလုံးရှိတယ် - စိတ်အေးလက်အေးရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ ၀ န်ထမ်းကောင်းတွေ၊ လူတွေအများကြီးနဲ့အစားအစာကောင်းတယ်။
ကော်ဖီဆိုင်ကတော့လူတွေပြောတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေပါ။ သောကြာနေ့နှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်တေးဂီတကိုဖျော်ဖြေသည်။ သူတို့သည် visitors ည့်သည်များ ၀ ယ်နိုင်သော ၀ တ်စုံတိုင်းတွင်လှပသောအနုပညာလက်ရာများရှိသည်။ အုပ်စုများသို့အလည်အပတ်သွားရန်နှင့်သူတို့အတွက်တွေ့ဆုံရန်နေရာများစွာရှိသည် - ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အစည်းအဝေးများ၊ မိုးရွာစေသူများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ ကဗျာညများစသည်တို့ကိုကျင်းပကြသည်။
အဆိုပါကော်ဖီဆိုင်အတော်လေးကောင်းကောင်း! ကော်ဖီတစ်လုံးတည်းသာသူတို့ရှိသည့်စီးပွားရေးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ သို့သော်ကြော်ငြာဘတ်ဂျက်မရှိဘဲ၎င်းသည်နာယကအသစ်များရရှိရန်ကူညီသောအခြားပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်နှစ်အကြာတွင်စီးပွားရေးသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည်။
ကော်ဖီဆိုင်သည်ကော်ဖီအလွန်ကောင်းသည့်အတွက်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အလွန်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်သူမဆိုလာမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်အသုံးချသင့်သည့်သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားရန်အတွက်နည်းဗျူဟာများစွာရှိသည်။
ပါးစပ်မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုဖန်တီးရန်အခြားနည်းလမ်းများရှာဖွေခြင်း…မှတ်ချက်ပေးခြင်း အခြားဆိုဒ်များပေါ်တွင်, ဗိုင်းရပ်စ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, လူထုဟောပြောချက်, ဘလော့ဂ်စီးပွားရေးကဒ်များလူမှုရေးကွန်ရက်တွေမှာပါ ၀ င်မှု၊ လူမှုရေး နေပြည်တော်အခြားဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း (Cross-promotion) ။
သင်၏ဆိုက်ဘယ်မှာလဲ။ ဘယ်လိုပုံလဲ ဒါကိုလူတွေဘယ်လိုရှာကြတာလဲ။
သင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါ၊ မင်းလုပ်ရမယ့်နောက်ဆုံးအရာကအဓိကလမ်းမကြီးကနေမိုင်အနည်းငယ်အကွာမှာရှိပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အ ဦး ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်နေရာနှင့်လူများကရှာတွေ့နိုင်မည့်စတိုးဆိုင်ကိုသင်နေရာချရန်လိုအပ်သည်။
အဆင်ပြေပြီးလူတွေပြန်လာချင်တဲ့စတိုးဆိုင်တစ်ခုကိုလည်းဖွင့်ချင်တယ်။ ငါလမ်းလျှောက်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ခါမှမဝင်ဖူးတဲ့ငါ့ဆီကလမ်းပေါ်ကကွန်ပျူတာဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ အတွင်းပိုင်းကနေရာတစ်နေရာလုံးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေသိုလှောင်ထားတဲ့ဗီရိုတစ်လုံးနဲ့တူတယ်။ Best Buy သို့သွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ပြားချပ်ချပ်ဖန်သားပြင်ရုပ်မြင်သံကြားနံရံများကိုအချိန်တိုင်းလမ်းလျှောက်။ မရ။ Best Buy ကိုသွားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဈေးဝယ်ရတာကြိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ကော်ဖီဆိုင်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်ပါကသင် Starbucks တွင်မရှိကြောင်းကိုသင်သိပါလိမ့်မည်။ အရောင်တောက်တောက်ရောင်စုံအနုပညာလက်ရာများရှိပြီး Barista ဘူတာသည်သူတို့ ၀ င်လာစဉ်နာယကများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဘူတာရုံသည်အိမ်ရှေ့တံခါးနှင့်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဆိုင်များတွင်မည်သူဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်လူများအနေဖြင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်ရကြသည်။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး ကုန်ထုတ်ရေးလိုင်း သငျသညျအတွင်းနှင့်ထွက်အလျင်စလိုရန်ဒီဇိုင်းဆိုင်။
သင်၏ site တည်နေရာနှင့်သင်စဉ်းစားသင့်သည့် layout အတွက်နည်းဗျူဟာအနည်းငယ်ရှိသည်။
လူကြီးမင်း၏ site ကိုရှာဖွေရန်အတွက် search engine ၏နည်းဗျူဟာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။ ၎င်းသည်ကလစ်နှိပ်ခြင်းအတွက်ငွေပေးချေရန်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်သင်၏ဆိုဒ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ဆိုလိုသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ် ဦး ဖြန့်ကျက် robots.txt ရှာဖွေရေး bot အတွက် usher နှင့်အလုပ်အတွက် file ဇယားများ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသွားလာရန်အညွှန်းအစီအစဉ်တစ်ခု၊ သင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သည့်အခါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအသိပေးခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်အဆင်ပြေသောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
ကြီးစွာသောဒိုမိန်းအမည်ကိုရွေးပါ။ ၎င်းသည်လူတို့၏မှတ်မိရန်လွယ်ကူသည့် .com extension (ယနေ့ထိအရေးကြီးနေဆဲ) နှင့်မည်သည့်တုံးတိုတမျိူးမျိူးကိုမျှမရသောဒိုမိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေးရှေးသည် yourstore.com ကိုမှတ်မိမည်ဖြစ်သော်လည်း bots-r-us.info ကိုမှတ်မိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကောင်းဆုံးဒိုမိန်းများသည်သင်ရှာဖွေသောသော့ချက်စာလုံးများဖြစ်သည်။ ဥပမာတစျခု - အကယ်၍ domain name တွင် 'marketing' သို့မဟုတ် 'technology' ရှိပါကကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည် SEO အဆင့်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။
ဆိုက်၏ဗေဒ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အပြင်အဆင်နှင့်ပုံစံသည်သင်ဖော်ပြလိုသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သဘောထားကိုထင်ဟပ်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ငါကဒီကိစ္စကိုစိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါမှားခဲ့တယ် ပိုကြီးတဲ့ဆိုဒ်များကတစ် ဦး နှင့်အတူအသွားအလာအတွက်အမြတ်အစွန်းကိုမြင်လျှင်နေကြသည် အသစ်ကဒီဇိုင်း။ Web 2.0 site တစ်ခုကိုဖွင့်လိုပါသလား။ သေချာအောင်လုပ်ပါ Web 2.0 site တစ်ခုနှင့်တူသည်!
မင်းတို့မှန်ကန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရပြီ၊ မင်းအကြောင်းကလူတွေကိုပြောပြပြီးပြီ။ သူတို့လာတာစတင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းထားသလဲ။ သင့်မှာလူတွေကိုပြန်လာနိုင်အောင်အကြောင်းအရာနှင့်နည်းဗျူဟာများလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်၊ သင့်မှာရှိသူများကိုသိမ်းဆည်းမယ့်အစား new ည့်သည်အသစ်များရှာဖွေတာကိုသင့်ရဲ့အချိန်အားလုံးကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆိုဒ်မှာရှိပါသလား RSS ကို ကျွေးမွေးလား RSS သည်နည်းပညာကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်လှပသောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ဆိုက်ကိုခဏတာပြန်မလာဘူးဆိုရင်တောင်သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေကိုသင်ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အချိန်ကာလအားဖြင့်သူတို့ feeds တွေပေါ်မှာလဲထိမိလဲနိုင်တယ်။
သင်၏ဆိုဒ်တွင်အီးမေးလ်တွင်စာရင်းပေးသွင်းမှုရွေးစရာရှိသလား။ တနည်းကား၊ ဤသည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သော retention tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး (သင်၏ email ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်) စိတ်ဝင်စားမှုပြပြီးသောစိတ်ဝင်စားသောအလားအလာများ (သို့) ဖောက်သည်များအားအသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တန်း၏ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ငါ Prada ကောက်ယူတာကိုရိုးသားစွာသုံးခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Prada store မှာဆောင်းပါးကိုဘယ်နေရာအလယ်မှာတွေ့ပြီလဲ။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကောင်းမွန်သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
Tags: website တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကော်ဖီဆိုင်domain name ကိုPradaလက်ရှိထားခြင်းဆိုက်ကိုsite အကြောင်းအရာစတိုးဆိုင်က်ဘ်ဆိုက်ခံတွင်း၏စကားလုံး